आफैंसँग भिड्ने भए नायक सुशील श्रेष्ठ! – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७६ आश्विन २, बिहीबार १०:०९
काठमाडौं –अहिलेका चल्तीका अभिनेता अनमोल केसीलाई ‘स्टार’ बनाएको फिल्म ‘होस्टेल’ को दोस्रो पार्टबाट अभिनय यात्रा थालनी गरेका अभिनेता सुशील श्रेष्ठ गएको डेढ वर्षदेखि पर्दामा देखिएका छैनन् । उनको पछिल्लो रिलिज फिल्म ‘कारखाना’ हो । यस वर्ष भने उनको प्रमुख भूमिका रहेका दुई फिल्म रिलिज हुँदैछन्, ‘लभ डायरिज’ र ‘बादशाह जुट’ । यी दुई फिल्ममाथि उनको निकै ठूलो आशा र भरोसा छ । तर, पटक-पटक प्रदर्शन मिति सरेको देख्दा यस वर्ष पनि दुई फिल्म प्रदर्शन हुनेमा शंका उब्जन थालेको छ । ‘लभ डायरिज’ असोज ३ गते फिल्म ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ सँग डराएर कात्तिक १५ मा पुग्यो । ‘बादशाह जुट’ गत वर्ष नै प्रदर्शनमा आउनु पर्ने थियो । तर, घोषणा गरेको मितिमा अर्को ठूलो फिल्म आएपछि प्रदर्शन हुन सकेन । बल्लतल्ल कात्तिक १ गतेलाई प्रदर्शन मिति घोषणा गरिएको थियो ।
तर, असोज २३ गते यस वर्षको बहुप्रतिक्षीत फिल्म ‘छ माया छपक्कै’ आउने भएपछि यो फिल्म फेरि घोषित मितिबाट पछाडि हटेको छ । अब अभिनेता सुशील आफैंसँग बक्सअफिसमा भिड्ने भएका छन् । अर्थात्, ‘लभ डायरिज’ ले घोषणा गरेकै मितिमा ‘बादशाह जुट’ आउने निश्चित भएको छ । ‘लभ डायरिज’ केही पछाडि हट्न तयार भएपछि यो फिल्म कात्तिक १५ मा आउन लागेको जानकारी प्राप्त छ । आफूले आफूलाई बादशाह सम्झने दुई युवाको कथामा निर्माण भएको ‘बादशाह जुट’ लाई जोनी सिंह राणाले निर्देशन गरेका हुन् । उनी आफैंले तयार पारेको कथामा निर्मित यस फिल्ममा सुशीलका अलावा रविन तामाङ, आमिर गौतम, रोषी खड्का, केइषा रावत, रश्मि पाण्डे, दीपक क्षेत्री, कमलमणि नेपाललगायतको पनि अभिनय छ । फिल्मको गत वर्ष नै ‘काफल पाक्यो’ गीत सार्वजनिक गरिएको थियो । एच एण्ड बि फिल्मस् प्रा.लि. र गोल्डेन ग्रेप्स फिल्मस् एण्ड इन्टरटेनमेन्ट प्रा.लि. को संयुक्त व्यानरमा निर्माण भएको फिल्ममा राजु कार्कीको डिओपी, राज कुमार उप्रेतीको द्वन्द्व, कृष्ण भारद्धाज, कोशिस क्षेत्री र मोहित मुनालको संगीत, दिर्घ खड्काको सम्पादन रहेको छ । हर्क बहादुर कुँवर (पिटर) र भोजराज श्रेष्ठ (मिकी) ले फिल्मको निर्माण गरेका हुन् । फिल्ममा प्रियंका कार्कीको अतिथी भूमिका छ ।